မိုးရာသီကာလ အတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် လူပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် - Yangon Media Group
မိုးရာသီကာလ အတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌ သွေးလွန် တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် လူပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်
ဂျကာတာ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၈
ယခုလအတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ လူပေါင်း ၁ဝဝ ကျော်မှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရ ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ လူသေဆုံးမှုအများဆုံးအရေအတွက်ဖြစ်သည့် ၄၁ ဦးမှာ အရှေ့ဂျာဗားပြည်နယ်တွင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ မြောက်ပိုင်း ဆူလာဝေစီတွင် ၁၃ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး အရှေ့နျူဆာတန်ဂါရာပြည်နယ်တွင် ၁၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လွန်ခဲ့သော ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်အထိ အခြားပြည်နယ် ၁၆ ခုတွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကြောင့် လူ ၁၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗဟိုဂျာဗားပြည်နယ်တွင် လူကိုးဦး၊ အနောက်ဂျာဗားတွင်တစ်ဦး၊ တောင်ပိုင်းဆူလာဝေစီတွင် ခုနစ်ဦးတို့ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ် ပြန်ထားသည်။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖြစ်ပွားစေသည့် ခြင်များပေါက်ပွားရာ မိုးရာသီကာလအတွင်း ယခုနှစ်၌ နိုင်ငံတစ်ဝန်း မြို့နှင့်ဒေသ ၃၇၂ ခုတို့တွင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်ပွားသူ အ နည်းဆုံး ၉၆၃၄ ဦးကို မှတ်တမ်း တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဒေသ လေး ခုတွင်လည်း သွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါ အရေးပေါ်အခြေအနေကို ကြေညာခဲ့ရသည်။
ဒေါက်တာဆီတီက ”အခုလိုမျိုး မိုးရာသီဟာ ခြင်တွေအတွက် ပေါက်ပွားဖို့ လွယ်ကူစေပါတယ်။ ခြင်အမတစ်ကောင်ဟာ ဥရာနဲ့ချီလွယ်နိုင်ပြီး နှစ်ရက်အတွင်း ယင်း ဥတွေကနေ အကောင်ပေါက်ခြင် တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိုးရာသီအတွင်းမှာ နိုး နိုးကြားကြားရှိကြပါ။ ရောဂါပျံ့နှံ့မှုကို ဒေသတွေအတွင်းမှာ ဘယ်လိုကာကွယ်သလဲဆိုတဲ့အ ပေါ် မူတည်ပြီး လာမယ့်ဖေဖော် ဝါရီနဲ့ မတ်လတို့မှာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိလာနိုင်ပါတယ်”ဟု သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။
မန္တလေးမြို့၌ လန်ချန်း- မဲခေါင်ဒေသ ခြောက်နိုင်ငံ အစည်းအဝေး ရှိသောကြောင့်ဟုဆိုကာ အောင်သပြေေ??
ပီရူးနိုင်ငံ၌ ဟိုတယ်ပေါ်သို့ မြေပြိုမှုဖြစ်၊ ၁၅ ဦးသေဆုံး
သရဲနီ စိတ်ဓါတ်ကို ဆိုးလ်ရှား ပြန်အသက်သွင်းပေး နိုင်ခဲ့ပြီလား
မေဂျာလိဂ်တွင် အသင်းသစ် တစ်သင်းတည် ထောင်ခွင့်လိုင်စင် ဘက်ခမ်းရရှိ၊ အသင်းသစ်အတွက် ဥရောပမှ န??
ညောင်လေးပင်မြို့နယ် အတွင်း ရွှေခရုများ ကျရောက်၍ စိုက်ပျိုးပြီး လယ်ဧက အချို့ ပျက်စီး
လက်ပံတောင်းတောင် ဆိုင်ရာ တိုင်ကြားစာပေးပို့မှု တရုတ်သံရုံး လက်မခံ
ပြည်သူ့ပါတီ၏ ပထမဆုံး တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ရုံးအဖြစ် စစ်ကိုင်းတိုင်းရုံးကို မုံရွာတွ?